Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FC Porto si Nigeria & ụwa | TAA
Mikel Agu: Enweghị m nrụgide iji dochie Mikel Obi
Mikel Agu siri ọnwụ na ọ dịghị nrụgide na ya mgbe ndị Super Eagles kpọrọ ya ka ọ bụrụ oge nchigharị maka onye na-egwu ski Mikel Obi maka ọkụ ọkụ ụwa nke Tuesday na Serbia na London.
Onye isi iwu nke Benfica boro ebubo nyocha
Isi ụlọ ọrụ Benfica na onye na-arụ ọrụ kọmputa na Ngalaba Na-ahụ Maka Ikpe Ziri Ezi na Portugal bụ ndị a boro ebubo n'okwu ikpe rụrụ arụ metụtara ụlọ ọrụ Lisbon, otu ụlọ ọrụ ikpe kwuru.
Sadio Mane: Liverpool ọ bụla so n'ụwa
Liverpool dị ka Sadio Mane kwenyere na Merseyside club nwere ike imeri ìgwè ọ bụla na ụwa, gụnyere ndị na-agba ilu na ndị agha Manchester United na Saturday.
Jose Mourinho na-egosi na RT maka pụrụ iche Russia 2018 mkpuchi
Enigmatic onye njikwa football na onye onwe ya bụ 'Onye Pụrụ Iche' José Mourinho aghọwo ntinye aka ọhụrụ nke RT. Ọ ga-enye echiche pụrụ iche ya na egwuregwu maka FIFA 2018 World Cup Russian pụrụ iche mkpuchi.
Gennaro Gattuso: Enweghị nsogbu ego 'AC Milan' zuru oke
Onye nchịkwa AC Milan bụ Gennaro Gattuso kwusiri ike na ụgwọ akwụ ụgwọ a na-akwụ ụgwọ ka ọ na-agọnahụ akụkọ banyere nsogbu ego na ụlọ.
Esi kwụsị Alexis Sanchez? Jide ya - nkuzi Sevilla
Onye nchịkwa Sevilla Vincenzo Montella jọrọ na ya nwere ike iji akwụkwọ na-emetụta egwu egwu nke Alexis Sanchez mgbe ndị òtù ya bịara megide Manchester United na Njikọ Njikọ na Wednesday.
Liverpool 'kacha mma m coached' - Jurgen Klopp
Jurgen Klopp na-ekwu na ndị agha Liverpool ugbu a bụ ike ya na ya na-arụkọ ọrụ dị ka ndị egwuregwu na-akwadebe maka ịlaghachi mgbe emechara ọzụzụ ọzụzụ ọkụ na Spain.
Claudio Ranieri setịpụrụ maka nzukọ Monaco ka PSG na-ele anya na ike
Claudio Ranieri kwetara na ya nwere "ihe ncheta dị egwu" nke ịnye coaching Monaco dịka akụkụ ya ndị Nantes kwadebere ịkwado ndị mmeri na-agba ọchịchị mgba okpuru n'etiti egwuregwu na Ligue 1.
Onyinye CAF: Victor Moses, 10 ndị ọzọ na-ede ndepụta dị mkpirikpi
Victor Chelsea bụ Victor Moses na-eduga 10 isi afrika Afrika kachasị elu na ndepụta kachasị ọhụrụ nke ndị nomine maka 2017 CAF Player of the Year Award.
Algeria kwadoro akụkọ Rabah Madjer dị ka onye nchịkwa mba ọhụrụ
Ndi Algeria Football Federation kwuputala akwukwo egwuregwu Algeria Rabah Madjer dika ndi nchikota ha.
Claudio Ranieri, Gernot Rohr emewo m ka m bụrụ onye na-agbachitere - Chidozie Awaziem
Onye Nantes nke France, bụ Chidozie Awaziem, kwadoro ọrụ ole na ole na-eme ka ọ bụrụ onye nchekwube site na onye nchịkwa nke otu mba Nigeria bụ Gernot Rohr na onye nkụzi ya bụ Claudio Ranieri.
WCQ: Cameroon ahụhụ bụ ezigbo oku - Ezenwa
Super Eagles goalkeeper Ikechukwu Ezenwa has said the penalty awarded against him in Cameroon in a World Cup qualifier was wrong.
Mikel Agu jikọtara Bursaspor site na Porto
Gọọmenti Portuguese, FC Porto, emeela mkparịta ụka nke ga-ahụ onye na-agbata obi na Nigeria bụ Michael Agu sonyere Butrsaspor FC nke Turkey na nkwekọrịta ego.